musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » Waini Yakapfuma Italy Hapana Chitsva: Mazambiringa Anoenda Native
Culinary • tsika nemagariro • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Waini & Midzimu
Italy ndiyo chete nyika pasi rose ine viticulture mumatunhu ayo ese, kubva kumahombekombe egungwa ane nyoro kusvika kuzasi kwemakomo eApennine, Italy Alps neDolomites. Mizambiringa inokura kubva pahupamhi hwemadhigirii makumi matatu nenhanhatu pachitsuwa chiri kumaodzanyemba kwePantelleria kusvika kunosvika madhigirii makumi mana nemanomwe mumupata weAlpine weValtelina.
Dzinokura munzvimbo dzakasiyana-siyana dzepedoclimatic (microclimate mukati mevhu inobatanidza kusanganiswa kwekushisa, mvura yehuwandu uye aeration).
Inenge 28 muzana yemarudzi emazambiringa epasi rose anobva kuItaly.
Inopfuura 85 muzana yepasi peItaly yakazvipira kune viticulture nemhando dzakareba dzakasimbiswa (kunyangwe pasina mhando dzakanyanya).
Paizove newaini pasina Italy here?
Zvinonakidza kuziva kuti kupihwa simba rezvematongerwo enyika renyika (kusvika hafu yechipiri yezana ramakore rechi 19), uye kukosha kwemisika yemuno (kuzosvika kuma1970), kuti kusiyana kwemamiriro ekukura kwakaita kuti Italy ichengetedze. nhaka yakapfuma kwazvo yemhando dzemazambiringa dziripo kubva pakutanga kwenguva.
Waini dzakasiyana uye dzakaoma
Sangiovese, mazambiringa matsvuku emuItaly anorimwa zvakanyanya munyika yose, hainyanyi kufukidza gumi nembiri muzana yenzvimbo inorimwa muzambiringa wenyika, nepo mumwe wayo wemuzambiringa muchena, Trebbiano Toscano, anoverengera isingasviki 12 muzana, zvichiita kuti mamiriro ekukura kwewaini yekuItaly ave akasiyana zvinoshamisa. Nyanzvi yeAmpelologist Anna Schneider anofungidzira kuti kune zvingangoita mazana maviri emarudzi emazambiringa akarimwa muItaly (kusvika 7). Dzimwe nyanzvi dzinoratidza kuti ingangoita chiuru chemhando dzemazambiringa akarimwa eItaly akazivikanwa genetic uye mazana matanhatu ari kushandiswa kugadzira. waini mune zvekutengesa zvakakosha nhamba.
Kana rudzi rwemazambiringa rusina kunyorwa muNational Registry, hapana chirimwa kubva kune chakasiyana chinogona kuitwa kuti chiwanikwe kuti chiparadzwe munzvimbo dzekutengesa. Parizvino kune mazana mana nemakumi matanhatu nerimwe emhando dzemhando dzemazambiringa, asi vanhu vakazvimirira uye masangano ari kushanda kuti abatanidze mamwe. Pamakumi maviri epamusoro akarimwa mazambiringa muItaly, gumi nematanhatu ndeako uye mana ekunze kwenyika (Merlot, Chardonnay, Pinot Grigio neCabernet Sauvignon) neMerlot neChardonnay vari mugumi.
Mhando dzemazambiringa: Yakakamurwa kuita mapoka matatu
Native (kana chizvarwa)
International (kana kunze kwenyika)
Mazambiringa anoonekwa seakaberekerwa kana "akazvarwa" mune imwe nzvimbo uye akaramba akabatana chete nenzvimbo iyoyo. Zvinogoneka kuti akawanda anonzi "mazambiringa emuItaly" chaiwo ndeeGreek kana Middle East mavambo, anounzwa kunze nekudzoka kwemauto eRoma, vatengesi vegungwa vekuFenikiya uye maGreek colonist. Ian D'Agata akatsunga kuti, "Kunyatsotaura, kwete zvese Mazambiringa eItaly saka ndezvamazvirokwazvo uye emuno anogona kunge ari izwi riri nani kutsanangura iwo marudzi ekuzvarwa ayo mabviro asiri eItalian…”
Mazambiringa emunyika (kusiyana neCabernet Sauvignon neChardonnay) haana kusimba uye anofurirwa zviri nyore ne:
Nzira dzekare dzekugadzira waini (kureva, kutanha mazambiringa ese panguva imwe chete, zvisinei nekukura kwakanyanya)
Kusavapo kwehutsanana hwe cellar (zvichibatsira mukuparara kwewaini)
Kuchinja kwemamiriro ekunze
Mhedzisiro (mune dzimwe nguva):
Kuravira kwewaini yepakutanga yeItaly yakasiyana newaini yazvino
Mazambiringa anoburitsa masumbu anotsemuka achibvumira kugadzirwa kwemavhoriyamu mashoma
Mafaro emamwe marudzi akazara oxidized uye haana acidity inoburitsa isina kusimba, waini yakapfava
Mazambiringa anokura panguva dzakasiyana aine mabheri egirinhi asina kuibva ari pedyo neakanyatsoibva. Michero isina kuibva inogona kubviswa; zvisinei, muitiro unodhura, unopedza nguva unoitwa nemaoko kana kuti muchina wokusonga unodhura zvikuru. Kana kurongeka kukasaitwa waini inozobuda ingangove neruvara rwegirinhi rwezvinonhuhwirira uye kunaka.
Maitiro emazuva ano ekugadzira waini anogona kuve nengozi kumazambiringa ekuzvarwa eItaly uye basa rembiriso rinogona kushomeka. Mhando dzakasiyana dzembiriso dzinoshandiswa mukuvirisa doro dzinogona kutungamira kune akasiyana enological mhedzisiro kunyangwe iwo mazambiringa akafanana, akakurira muvhu rakafanana, anoshandiswa.
1. Aglianico del Taburno DOCG (La Fortezza Soc. Agr. Srl). Yakagadzwa seDOC muna 1986; kuva DOCG muna 2011. Native kuCampania, Basilicata (maodzanyemba matunhu) mazambiringa anobudisa yakazara-muviri reds uye roses. Pamwe chete neSangiovese neNebbiolo, Aglianico ndeimwe yemhando nhatu dzemhando dzeItaly. Kazhinji waini inobva mumhando iyi inonzi Barolo yekuMaodzanyemba nekuda kwekugona kwayo kugadzira waini yakacheneswa, yakaoma kunzwisisa. Waini inogadzirwa kubva kuAglianico yakadzika garnet kuziso ine chokoreti uye plum inonhuwira uye inoita kunge yakazara-yakazara neyakaomarara tanning, high acidity uye yakanaka yekuchembera. Sezvo ichikura, chibereko chinowedzera kujeka uye tannins inowedzera.
2. La Fortezza. 100 muzana Aglianico del Taburno DOCG. Ruby yakatsvuka kuziso, mhino inowana kunhuhwirira kwemabheri emusango matema. Iyo yakapfava pamuromo ine zvinyorwa zvinofadza zveblack cherry jam. Mazambiringa anokohwewa nemaoko pakupera kwaGumiguru uye anopedza 8 mwedzi musimbi, imwezve 10 mwedzi mubarrique uyezve mumadhiramu. Waini iyi inoda kucheneswa nguva isati yakwana. Shumira ne pasta, nyama (kunyanya yakagochwa, nyama uye sosi) uye/kana chizi yachembera.
3. Lambrusco Modena DOC (Cantina Ventiventi Societa Agricola Il Borghetto). Mazambiringa anofanira kurimwa mudunhu reModena uye anosanganisira anotevera marudzi (85-100 muzana): Grasparossa Lambrusco, Lambrusco Salami, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Oliva Lambrusco (anoshandiswa ari ega kana ane mvumo. kuwedzera kweAncellotta yemuvara) mazambiringa, Malbo Gentile uye/kana Fontana mazambiringa (anosvika gumi neshanu muzana). Mazambiringa anoburitsa waini tsvuku inopenya ine ruvara rweruby, kunhuhwirira kwakapfava uye kutapira pamukanwa kunowedzerwa nemavara emaruva.
Mamiriro ekunze anodziya nekupisa kunopisa uye kunotonhora. Ivhu riri mubani reEmilia Romagna rakapfuma mumunyu wemaminerari uye minda yemizambiringa iri pachikomo inotongwa nevhu rine jecha, ichigadzira waini inoreruka uye inonakidzwa vachiri vadiki.
Waini inogona kukura mubhodhoro uye inowanzoviriswa uchishandisa nzira dzechinyakare. Kudzvanya hakugone kudarika 80 litres iyo yakakwira zvishoma pane Champagne. Kuvirisa kunoitika pakudziya kwakadzikira (23-25 ​​madhigirii) kuchengetedza michero mitsva inonhuhwirira uye kubvisa nhamba shoma yematannins.
• Cantina Ventiventi Rose Lambrusco Di Modenado. 100 muzana Sorbara mazambiringa.
Mhuri yekwaRazzaboni ine munda uyu wemizambiringa muModenese maneja weMedolla. Munda wemizambiringa unoshandisa Metodo Classico, kugadzira waini itsva uye yakasiyana. Certified organic muna 2019, goho remuchina rakarongerwa maawa anotonhora ezuva. Mazambiringa anobva atonhodzwa uye akatsikirirwa zvinyoro. Kuvirisa kunoitwa pasi petembiricha inodzorwa musimbi isina tsvina uye kutonhora kwenguva refu musimbi. Kuwedzerwa kwemunofanira uye yechipiri kuvirisa mubhodhoro kunoitwa pasi pekushisa kunodzorwa.
Pink yakapfava kuziso, ine michero mitsvuku inopa mubayiro mhino. Yakapfava uye inonaka pamuromo yakaenzana neminerarity. Kupera uye kuenderera mberi perlage kunowedzera kutsva. Batanidza nehove.
4. Trebbiano d'Abruzzo DOC (yakafanana neFrench Ugni Blanc)
Abruzzo inzvimbo yewaini iri pakati-kumabvazuva kweItari pamhenderekedzo yegungwa reAdriatic Sea. Zvinoenderana nemutemo weDOC wepamutemo, waini yeTrebbiano d'Abruzzo inofanirwa kugadzirwa kubva pa85 - 100 muzana yeTrebbiano Toscano kana Trebbiano Abruzzese kana musanganiswa wemapoka maviri aya.
Mazambiringa eTrebbiano d'Abruzzo akanyorwa muna 1856 naRaffaele Sersante uyo akacherechedza mukurumbira uye kuwanda kwemhando yemazambiringa muminda yemizambiringa. Muzambiringa wewaini chena unobereka zvakanyanya wakabva kuSouth-Eastern Mediterranean. Inokura zvakanyanya muvhu re argillo-calcareous. Parizvino miti yekudyara ndiyo inodarika hafu yewaini chena munyika.
Waini ndeyegoridhe muruvara, kazhinji yakaoma uye michero-mberi ine bouquet yakapfava yemuchero yeyero, maapuro, lemon zest uye maruva machena kumhino. Iyo mukanwa inowana yakaenzana, inokurudzira acidity, yakavanzika, inoyevedza yero plums. Vamwe vagadziri vanoshandisa kuvirisa kwembiya uye/kana kuibva kwembiru kuwedzera kuoma, kudzika uye muviri. Ndiyo yega DOC muAbruzzo inongoshanda muwaini chena chete. Inwa pwere uye inotonhora. Patanidza ne pasta yegungwa, risotto, muto wemuriwo, hove yakabikwa muovheni kana yakagochwa.
• Azienda Vinicola Talmonti. 100 muzana Trebbiano
Yakatangwa nemhuri yeDi Tonno muAbruzzi iyo 32-hekita yemunda wemizambiringa inoumbwa nevhu reraimu, ivhu recalcareous iro rakagadzirwa uye rinodirwa, 300 metres pamusoro pegungwa. Kunyatsosarudzwa kwemazambiringa kunoitwa kutanga kwaSeptember. Mazambiringa mazambiringa anobviswa uye anoteverwa nepfupi inotonhora maceration yemazambiringa akapwanyika musimbi isina tsvina inoteverwa nekunyorova kudzvanya uye decanting of the must. Kuvirisa doro nembiriso yakasarudzwa kunotora mazuva gumi; kubhodha kunoitika mwedzi mishoma mushure mekukohwa.
Ruvara rweshanga rwakacheneruka neruvara rwegirinhi rwakareruka runofadza ziso, rwuchipa maruva akapfuma anowedzerwa nekunhuhwirira kwemaruva eviolets ane maapuro, cherry uye peach kumhino. Nguva pfupi inoshandiswa mubhodhoro inobudisa waini ine tannins iyo yakaoma asi isingasviki uye iyo yekupedzisira inopenya, yakachena uye yakachena. Shandira seaperitif uye/kana nehuku, hove dzegungwa, nyama yenguruve kana ham.
Aglianico mazambiringa matema anorimwa munzvimbo dzekumaodzanyemba kweItari (Basilicata neCampania). Inofungidzirwa kuti yakabva kuGreece uye yakarimwa nevaPhocians kubva kumuzambiringa wemadzitateguru usingazivikanwi; zvisinei, ongororo yeDNA yemazuva ano haitsigire maonero aya sezvo ichiratidza hukama hushoma nemamwe marudzi emazambiringa echiGiriki. Iwo akasiyana akatanga kuoneka akadhindwa sechikadzi muzvizhinji Aglianiche (1520). Denis Duboudieu, nyanzvi yezvekuongorora nezvezvinoitika, akafunga kuti “Aglianico ingangove ndiro mazambiringa ane nhoroondo refu yevatengi pane ese. Yaishandiswa kugadzira waini yeFalemian munguva dzeRoma, waini yainyanya kuzivikanwa yaigadzirwa muRoma yekare uye yaionekwa zvakanaka naPliny Mukuru.
Agianico iwaini tsvuku ine chimiro, inorarama acidity uye kugona kuchembera. Kunhuhwirira kwemaruva, uye dzimwe nguva matannins asingapindiki anopindira apo achiedza kunakidzwa nekunaka kwemaminerari. Inoshandiswa zvakasiyana-siyana, uye waini kubva kune zvakasiyana-siyana izvi inogona kunakidzwa nevechidiki uye nezera zvakanaka. Inowanzo kuenzaniswa neNebbiolo, mazambiringa makuru eBarolo neBarbaresco. Yakabatana nedunhu reCampania kumaodzanyemba kweItari kubva kuGungwa reTyrrhenian kusanganisira Naples, Pompeii, Amalfi Coast, Salerno nePaestrum. Inoshanda muBasilicata.
(La Guardiense – Sannio 2014). 100 muzana Aglianico
Ziso rinonakidzwa neyakadzama uye yakasviba ruvara rutsvuku apo mhino inoona cherry yakasanganiswa nevanilla (kubva mumadhiramu), yakasanganiswa nezvinonhuhwira. Iyo mukanwa inovaraidzwa nematannins anogadzira yakapfava uye silky kuravira ruzivo.
Mazambiringa anokohwewa chikamu chechipiri chaGumiguru. Maceration pamatehwe kwemazuva gumi nemasere aine mashoma emazuva ese ekupomba pamusoro, 18 muzana inobuda ropa. Yakakwana apres-ski; batanidza ne pasta/muto wenyama, muto wemuriwo, nyama yenguruve, yakagochwa yegwayana, uye nyama yakarapwa.
6. Sfozato (kumanikidza mazambiringa) DOCG
Sfozato inogadzira waini tsvuku ine simba yakavakirwa paNebbiolo mazambiringa akasiyana muValtellina, dunhu riri mudunhu reLombardy kuchamhembe kweItaly. Iyo inowana huwandu hwepamusoro hwedoro uye hukuru hwekuisa nekuomesa mazambiringa (passito). Mazambiringa akanakisisa anosarudzwa uye chero ma berries akaora kana akakuvadzwa anofanira kubviswa sezvo nzira yekuomeswa inotarisa kusakwana.
Masumbu ese anoradzikwa pamatinji euswa munzvimbo dzinofefeterwa zvakanaka umo anogara kwemwedzi 3-4, bheri rimwe nerimwe richirasikirwa nezvikamu makumi mana kubva muzana zvehuremu hwaro nekuda kwekubuda kwemvura kunoisa shuga yemazambiringa chaiwo. Muto unoshanduka kuita sirapu inotapira uye yemhando yepamusoro Sforzato inogadzira waini yakazara-yakazara, yakakwira mudoro uye yakapfuma mukunhuhwirira inoburitsa kunhuhwirira kwakaoma kwezvinonhuwirira zvinotapira (kureva, licorice, cloves nesinamoni), stewed plums, prunes uye mazambiringa akaomeswa pamwe chete. tara nemaruva.
Munda wemizambiringa uyu wakavambwa muna 1986 naAlberto Marsetti uye anotenda kuti Nebbiolo ine hupfumi hwekuravira nemamiriro ekunze akakodzera. Munda wemizambiringa une mahekita gumi uri muSondrio umo ivhu rine jecha nekuda kwekuparara kwematombo akavharika.
Sfursat della Valtellina DOCG ndiyo yekare yewaini yeValtellina. Ortensio Lando (1540) akatsanangura iyo uye mamwe magwaro anocherechedza Sforzato kare kare 1300. Waini yakanga yakagadzirirwa kushandiswa kwemhuri uye inoshandiswa semushonga wekudzorera zvirwere. Nhasi zvakasiyana-siyana zvinozivikanwa sewaini yakanaka yeValtellina. Akwegura mumabhari, waini inokura kunhuhwirira kwakanyanya kwemorello-cherry mudoro ine tannins yakapfava uye yakanaka acidity. Gadzirai nechokoti yakasviba.
Ramangwana Remazambiringa Ekuzvarwa
Mazambiringa asingawanzo anozivikanwa nemashoko mazhinji anosanganisira kusajeka, esoteric, weird, chizvarwa, autochthonous kana kukanganwa. Wepakati mutengi wewaini anogona kushamisika kuti sei somms kana waini geeks vachinakidzwa zvakanyanya ne "kuwana" mazambiringa ekare. Zvakakosha kucherechedza kuti kutora sip yewaini yakagadzirwa kubva kumazambiringa asina kujeka ndeyechokwadi "yakakwirira" sezvo inopa pfungwa yekusiyana uye kuchinja kwekuravira kune munwi wewaini. Kusiyana-siyana kuri kuwedzera kudiwa munyika yewaini uye kukwanisa kwemazana (kana zviuru) zvemhando dzemazambiringa hazvikoshi chete semishoni, kuchengetedza kusiyana-siyana munyika yemiti, asi inopawo mutsara wekudzivirira mukutarisana nekupisa kwepasi.
Nharaunda dzewaini muEurope yose dzakatanga minda kuchengetedza zvisingawanzo siyana zvechivanhu. Kumaodzanyemba kweFrance, Domaine de Vassal, kireshi yehurumende (1878) inochengetedza mhando 7800, muunganidzwa mukuru pasi rose. MuSavoie, France, Alpine Ampelography Center inotsvaga mhando dzisingawanzo. Iyo ine nursery yayo, inoita micro-vinification's uye inobata musangano wepagore. Wine Mosaic, yakatangwa naLean-Luc Etievent naArnaud Daphy, inokurudzira kuchengetedzwa kwemhando dzemazambiringa dzekutanga dzeMediterranean.
Vazhinji "vachengeti vemizambiringa" vanotenda kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kunoda kuti mazambiringa akasiyana-siyana akumwe mune ramangwana, ayo anokurumidza kuibva, anopiswa nezuva zviri nyore kana kupa acidity iri nani kana tannic chimiro kupfuura marudzi akajairika. Mbeu dzakasakara dziri kudzikiswa nekuda kwekutadza kugadzirwa zvakanaka uye mhando dzemhando yepamusoro dziri panjodzi yekusanduka kwemamiriro ekunze. Nyika yewaini iri kuyedza kugadzirira shanduko uye kumutsiridza mhando dzekare dzemhinduro nyowani.